မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာအလှဆုံးအေိုငျမြား | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ > မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာအလှဆုံးအေိုငျမြား
ဥရောပရဲ့အမြန်ဆုံးရထားအချို့နှင့်အတူဆုံးနဲ့ သာယာလှပလမ်းကြောင်းများ, ရထားမြောက်ပိုင်းအီတလီမှာအလှဆုံးအေိုငျမြားခရီးသွားလာချွေဖြစ်ပါသည်, အဆင်ပြေ, နှင့်တိုက်ရိုက်, သို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်ရာပူဇော်သက္ကာကို ဒေသခံဘဝ, မကြာခဏ bargain သို့လှဲချကြီးအအမြင်များနှင့်အတူ.
ပါးရည်နပ်ရည်အနည်းငယ်နှင့်အတူ လမ်းကြောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အချိန်ဇယား, သငျသညျအတော်လေးအလွယ်တကူအဖြစ်ခရီးနည်းတူအထင်ကြီးစေမည်သည့်ခရီးစဉ်ကိုအတူတကွ piece နိုင်ပါတယ် ခရီးလမ်းဆုံး.
အများဆုံးနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင်, အီတလီ မြောက်ပိုင်းအီတလီနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မြောက်အမေရိကအဘိဓါန် South သွေးခွဲသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကျောရိုးနှင့်စက်မှုအင်အားကြီးဖွဲ့စည်းကြောင်းကြွားလိုက်ပါတယ်.
မျက်မှန်ကနေဖက်ရှင်စားနပ်ရိက္ခာရန်, အီတလီနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင်ကျော်ဘို့အကောင့် 50% ဒီထက်တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ထက်များပေမယ့် ... အီတလီစီးပွားရေး၏!
အဆိုပါ 8 ဒေသများဖြစ်ကြသည်:
နှစ်ခုတောင်တန်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါးရေချိုရေကန်များ, လှိမ့်တောင်ကုန်း, နှင့်စည်ကားသာဆိပ်ကမ်း, မြောက်အမေရိကအီတလီမှာမတူကွဲပြားမှုအများကြီးရှိပါတယ်, ပင်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးအတွက်. သင်သည် Dolomites တွင်နှင်းလျှောစီးခြင်းကိုစတင်နိုင်သည်, ရေကန် Como ခန့် laze နှင့်အဆုံးသတ် ခရီးစဉ် အတွက်ပင်လယ်စာအပေါ်စားသောက် Cinque Terre!
ကြိုက်တတ်တဲ့သူများသည် ဖက်ရှင် နှင့်အစားအစာတစ်ခုခုကိုစိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. Bologna တူသောအနီရောင်-မိုးမြို့ကြီးများခစျြစနိုး၏အီတလီနိုင်ငံမြို့စဉ်းစားနေကြတယ် gastronomic အလိုလိုကျလှနျးခွငျး Parma ဆင်ခြေဖုံး prosciutto ၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်လုပ်သူများမှာစဉ်နှင့် Parmesan.
ထိုအခါ, ဒါပေါ့, မီလန်နှင့်ထင်ရှားသောမြို့ကြီးနှစ်မြို့ရှိသည် ဗင်းနစ် အီတလီနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်! ငါဆိုသည်ကားသောအခါအကြှနျုပျကိုယုံကွညျစိတျခ, တိုင်းဧည့်သည်ကဒီမှာကိုချစ်ဖို့တစ်ခုခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်, သင် ... သင့်တယ် ကားငှား မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာအမျိုးမျိုးသောအေိုငျမြားကြည့်ဖို့ခရီးသွားလာသည့်အခါ. သငျသညျအများပြည်သူအပေါ်အားကိုးချင်လျှင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဒါကြောင့်ကျိန်းသေ doable ဖြစ်ပါတယ်.
မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာရေကန်များ – ရေကန် Como
မည်သူမဆိုနှင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာဖို့ရေကန် Como ဖော်ပြထားခြင်း, သူတို့မျက်စိဖွင့််လင်းလိမ့်မည်သူတို့ "George Clooney ပြောပါလိမ့်မယ်!"
ရေကန် Como, ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Lario, အီတလီမြောက်ပိုင်းရှိရေကန်များ၏တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဦးရေအများဆုံးအတိမ်အနက်နှင့်အတူ 410 မီတာ (448 ကိုက်), ထို့အပြင်ဥရောပအတွက်အနက်ရှိုင်းဆုံးရေကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်.
အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်မှန်: မင်းသိလား, င်း ဝိသေသပုံသဏ္.ာန်, တစ်ဦး၏ဆင်တူ inverted Y ကို, ရှေးဟောင်း Adda မြစ်၏တိုက်စားမှုအရေးယူမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရေခဲမြစ်များ၏အရည်ပျော်ရာမှရလဒ်များကို. ဒါက၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှဦးဆောင် နှစ်ခုတောင်ပိုင်းကိုင်းအခက်များ, ကမ္ဘာကြီးကိုလူကြိုက်များလည်းမရှိသည့်အလယ်၌ Bellagio.
အဆိုပါ၏ခွမှာတည်ရှိပါတယ် အဲလ်ပ်တောင်တန်း, ရေကန် Como အရှိဆုံးတဦးကိုထောက်ပံ့ပေး ပါ ကမ်ဘာပျေါတှငျ censorious. သငျသညျအီတလီရေကန်များသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအနုပညာရှင်အစက်အပြောက်မှတပါးရေကန် Como အတွက်လုပ်ဖို့အများကြီးအမှုအရာတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့အံ့အားသင့်လိမ့်မည်!
ရထားအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံမှရတဲ့တစ်ဦးမျှမ-brainer ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပြင်, ငါတို့တစ်တွေလှေပေါ်စီးနင်း hitching လွန်းတော်တော်အေးမြသည်ဝန်ခံပါလိမ့်မယ်. သငျသညျချင်တယ်အထူးသဖြင့်လျှင် အတှေ့အကွုံ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာအထူးသဖြင့်ရေကန် Como.
သငျသညျဖွစျစေ တစ်နေ့အဘို့ရေကန် Como သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်ကြာကြာတည်းခို, တစ်လှေတစ်စီးခုန်, အနားယူနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးမြို့ရောက်ရှိ: Bellagio, Varenna, အဖြစ်, ၏ဒါမှမဟုတ်တဦးတည်း သမိုင်းဆိုင်ရာ Villas အိုင်ကမ်းခြေပေါ်.
ရေကန် Garda ၏အကြီးဆုံးအေိုငျမြားတစျဦးဖွစျသညျ မြောက်ပိုင်းအီတလီ ငါးရေကန်အီတလီ၏ရေခဲမြစ်များနှင့်အကြီးဆုံး, ကတိုက်ကျွေး အဲလ်ပ်တောင်တန်း မြောက်ဘက်တွင်. Verona ၏မြောက်, ရေကန် Garda အရှိဆုံးမိသားစုဖြစ်ပါသည် – နှင့်ရေ အားကစား-oriented အီတလီနိုင်ငံရေကန်၏. ဒါဟာအစအီတလီနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအိုင်ဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါဖိုးချိုင့်ရဲ့မြောက်ပိုင်းအစွန်မှစောက်အယ်လ်ပိုင်းတောင်ခြေကနေရောက်ရှိ.
အဆိုပါတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကမ်းခြေအားဖြင့်စီတန်းနှင့်အနိမ့်တောင်ကုန်းများကကျောထောက်နောက်ခံပြုနေသည်. မြောက်ဘက်တွင်နေစဉ်, တောင်များ နှင့်သက်သက်ကမ်းပါးအိုင် fringe, အထူးသဖြင့်တလျှောက် အနောက်ပိုင်း ကမ်း. ၎င်း၏မြေပြင်အနေအထားရေကန်တစ်ပေးသည် ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး အားကစား-မေတ္တာရှင်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှု၏ ခရီးသွားဧည့်. ရွက်များနှင့်လေလှိုင်းစီးဘို့မှန်မှန်လေတိုက်နှုန်းကနေတောင်တက်များအတွက်တောင်ပေါ်, rappelling, နှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်စက်ဘီးစီးနေ, အိုင်အမြင်များနှင့်အတူအားလုံး.
တောင်မှပိုကောင်းသတင်း. ရေကန် Garda ၏တည်နေရာကသံလွင်နှင့်သံပုရာမြောက်ဘက်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အကွာအဝေးကောင်းစွာကြီးထွားဘယ်မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီဥတုပေးသည်. အခြို့သောနေ့လည်ခင်းက G ဘို့ပြီးပြည့်စုံသော&T က! ရှည်လျားသောသဲထည့်ပါ ကမ်းခြေ နှင့် Lakeside Promenade အမြင်များနှင့်အတူမြို့ရွာတစ် clutch. သင်ကိုယ်တိုင်စုံလင်တယ်ပါပြီ အားလပ်ရက်များ ခရီးလမ်းဆုံး!
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာအချို့ရအေိုငျမြားကိုတွေ့မြင်သွားလုပ်နေတာနဲ့တူခံစားမိကြဘူး? အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံနေချိန်မှာကယ်တင်ချင် ရထားဖြင့်အီတလီမြောက်ပိုင်းသို့ခရီးထွက်ခြင်း? သုံးပြီးအားလုံးသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ တစ်ဦးကရထား Save မိနစ်, အဘယ်သူမျှမက hidden အခကြေးငွေနှင့်အတူ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-lakes-northern-italy/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သင် / သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ja ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#lago #အင်းအိုင် #LakeComo #ရေကန် #နေပြည်တော် မြဝတီ မြိုင်ကြီးငူ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား